Meso ekurwa: Mutambo wakaomesesa pasi rese? | IPhone nhau
Meso ekurwa: Mutambo wakaomesesa pasi rese?
Ndinoyeuka ndichiona muApp Store mutambo une maficha anotyisa aigara ari pakati peanotorwa pasi. Ndiri kutaura nezveFlappy Shiri uye ndakafunga kuiridza apo pandakaona dzinoverengeka nhau nyaya nezvazvo. Mutambo uyu wakaomesesa zvekuti unoshungurudza uye pane chinhu chakanaka nezvemutambo uye chikamu cherunako, mune chishuwo chekuita zvibodzwa zvepamusoro uye kugona kuigovana. Kana Flappy Bird yaitaridzika kunge yakaoma kwauri, Kurwisana Maziso richava dambudziko rakakura kwazvo kwauri uye ini ndinofunga zvakatonyanya kushungurudza kana zvichibvira..
Typology yagadzira Masoja Ekurwa nepfungwa yekugadzira mutambo wakaomesesa pasi rese. Izvo hazvisi nyore kugadzira chimwe chinhu "chakanyanya pasirese" mune chimwe chinhu, asi chirevo che Edinho salinas uye kambani yakaoma kune yakapusa chokwadi chekuti isu tinofanirwa kutarisa pamapoinzi maviri panguva imwe chete. Chinhu chakadai senge psychotechnical test iyo yavanotiitira kuti titore rezinesi rekutyaira, asi tichiendeswa kwakanyanya.
Sezvauri kuona muvhidhiyo, isu tine mabhora maviri muzviitiko zviviri, imwe neimwe iri yayo. Paunobata chidzitiro, mabhora anoenda kunowira panze uye isu tinodzora chidimbu chega chedenderedzwa chinogona kudzivirira mabhora kudonha. Mutambo hauchazove nyore kwazvo neziso rimwe chete, saka nemaviri rakaoma. Uye iwo maviri maziso ndiwo ari nyore chikamu. Padanho rakaomarara pane maziso matatu atichafanira kudzora. Kungopenga chete. Ndine rekodhi ye3s padanho riri nyore uye ndinotonzwa kuzvikudza uye zvese.
Kukanganisa kwemitambo yakaoma iyi ndeyekuti ivo vakapindwa muropa uye isu hatitambe mutambo mumwe chete, asi kana iri nyaya yeMeso Ehondo iyo mitambo ipfupi chaizvo, saka isu tinonzwa kuti tinoona kuwanda kwakawanda. Ini handifunge chaizvo kuti kune yakawanda hype kupfuura Flappy ShiriZvakangoitika kuti muMeso Ehondo zvakanyanya kuoma kudzidza kutamba uye zvichave zvisingawanzo kutamba mitambo mirefu inotora nguva kushambadza. Asi hei, mutambo wacho wakasununguka uye hauna kutenga kwakabatana.
Kurwira Maziso mutambo unoda iOS 6.0 kana kuti gare gare, inowirirana ne iPhone, iPad, uye iPod touch, uye yakagadzirirwa iPhone 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Meso ekurwa: Mutambo wakaomesesa pasi rese?
Jonathan D. Sanchez akadaro
Pindura kuna Jonathan D. Sanchez
Unyengeri: Activate Caps Lock pane yako iPhone
Matipi uye manomano kune Anotsamwa Shiri 2